Umangede: ukuthi ukudla ngaphandle futhi ekhaya
Lokho ukudla izinyendle? Lo mbuzo uvame kuphakama lapho nje kuzwakala ingoma ajwayelekile isinambuzane ntathu efanekisela ukunethezeka kwasemzini. Mustached "aphethe Bhaka" Selokhu kwathi nhló sokucasuka eRussia sengqondo anenhlonipho; a imvuthuluka uyakwazi kakhulu inciphise ezingemnandi omakhelwane abaningi zigcwele namaphela.
Isithombe zokuphila ikhilikithi
Umangede basonta Nematocera suborder, Orthoptera squad futhi kunezinhlobo ezingaphezu kuka-2000 zilwane. Bayakwazi ukuzivumelanisa kahle imvelo, uzizwa ukhululekile ashisayo, ezishisayo zinomswakama futhi cishe oyinyumba, ezindaweni ezomile.
Ikhaya Cricket Acheta domestica ku bukhoma zasendle ezindaweni ehlane yeNyakatho Afrika, lapho amanzi itholakala kuphela ngesimo amathonsi amazolo, futhi nezimila cishe lingekho. Lokho ukudla izinyendle emvelweni? In esinjalo ezimweni eziphansi ehlane ohlala akusho akwesabe lutho, udla izinsalela organic wathola, ngisho kudala yomile.
Ngobudlova zimba isihlabathi, ibheka amaqanda, izibungu futhi iziphungumangathi nezinye izinambuzane. Ekhaya, ezisemagumbini emnyama egumbini elingaphansi noma ngaphansi phansi eqhugwaneni, Ikhilikithi liziphatha ngenkuthalo ebhubhisa zigcwele iphela izidleke kanye broods. Lokho ukudla izinyendle ekhaya?
Acheta domestica - okuwukuphela ikhilikithi, owakwazi ukuzivumelanisa nokuhlalisana nabantu. Lesi sici avunyelwe isinambuzane ukuhambisa ngendlela isiqondiso Northerly nihlale nomaphi lapho abantu baphile. Ehlobo, ikhilikithi eshiya yokuhlala sikulungele ukuba kuphilwe kuso futhi kuze kube abandayo ekwindla isuswe kwi "isinkwa khulula".
Kanjani izinyendle? Yini okufanele badle? Kuyaziwa ukuthi "eyisakhamuzi" mustached - izinambuzane nesizotha kakhulu futhi lutho kodwa ukucula, akusho lokuphindisela izeqamthetho lapho zenze khona yayo. Njengomthetho, endaweni ekhaya unelungelo ukuba bacule izingoma omunye umuntu kuphela - enamandla kakhulu kule besilisa endaweni. Abanye axoshwa, futhi ekulweni ubuqhawe akuyona-nokuphila nokufa. Umangede laqonda onilwelayo ubuqhawe, bona likhiphe nomunye amadevu, amaphiko, imilenze; kaningi winner odla ohluliwe. Isilonda esibi kunazo nebangela amahloni ubhekwa nokulahlekelwa Intshebe. Beardless ikhilikithi ihlazo eshiya empini, ulahlekelwa isimo producer and izimpilo esekudingisweni, ngaphandle kokukubonisa iso nabo.
Propensity izinyendle ukuba ukuhilizisana esetshenziswa ngempumelelo yi amazwe ase-Asia, uhlele izimpi okuthakazelisayo lezi zinambuzane. Ukuze kulungele ngokwanele ukubeka phakathi izitha ezinemilenze eyisithupha zesifazane, okuyiwona ngawo lowo mzuzwana ulwa sina kuqubuke impi. Won ubuqhawe uthola cell ukhululekile, imenyu ocebile futhi ethathe nabesifazane ezikhanga kakhulu. Nenzalo le fighter zizohlolwa e omningi imali.
Isimo salo losers abanikazi bezilwane pick up by bephonsa emoyeni than bophezela isinambuzane ukuze elule amaphiko akho bese fly. Ikhilikithi akusho ngimuke, kodwa vivacity kwemizwa yakhe ecindezelekile bokulahlekelwa nokwanda okuphawulekayo. Ngokusho ucwaningo, zindiza, octopamine isinambuzane ekhiqizwa - hormone okuthiwa angesabi, akunika ikhono eyeduna engizoba ngakulo.
Ikhilikithi sizalwa nawo indlela yokuphila ebusuku, kodwa isinambuzane nge kwelanga ungakhohlwa ukucula owaziwa zonke roulades. Musical instrument ikhilikithi itholakala phezu kwamaphiko; omunye elytra unikezwa "umnsalo" - uqweqwe umthambo ngenombolo enkulu amazinyo njalo ahlelwe ngesikhathi ezinye "string" - emithanjeni. Futhi "izimbotshana" samanje esibukweni ulwelwesi. Ukuze kukhishwe Cricket umsindo kuphakamisa elytra futhi kubenza iminyakazo ethile.
Ihubo Special isizinda nabo ovelele umumele Italian Oecanthus pellucens Scop. Kuyinto lolu hlobo AmaGreki asendulo igcinwe emakhejini. Master China Ingxenye yesakhiwo esetshenziselwa Esimweni esinjalo imithambo Ceramic - impahla uyakwazi ngezinye izikhathi agqamise umsindo uyeza umculi ezinamaphiko. By endleleni, ngaphandle wesilisa omdala, amazwe acebile umsindo umculo wakhe.
Emzabalazweni ukunakwa ladies
ladylove izinyendle besilisa ngempela finicky futhi ukuphoqelela umnumzana emini ebancenga: waltz emhlabeni okhethiweyo wami, ukuze axoshe nezimbangi, bacule Serenades. Uma kwenzeka ngokuwina besilisa kuthé inhliziyo esiswini ekhethekile izintokazi isikhwama imbewu - spermatophore - futhi ngokushesha bahlanza kude. Lokhu ukuqaphela yingoba zesifazane elivundisiwe iba abahahayo kakhulu futhi umuntu eqhuma indlala ungadla lover yakho.
Iqanda-kubekwa senziwa isonto elilodwa emva kokukhulelwa. Ngemva njalo ngemuva kwamasonto amabili phezu kobuso nhlabathi ziphungumangathi. Ngaphambi izigaba omdala isinambuzane baye ngokusebenzisa 4-6 nokwebuza kuthiwa ama. Amandla kanye nosayizi nemihlathi - sikhona ukuze izici ezinjalo kuhluke izibungu futhi omdala izinyendle.
Badla izinambuzane, izingane? Ukudla kwawo kuhlanganisa of izithelo, izithelo kanye amahlumela ithenda - nje kokudla.
izinyendle Domestic: abakudlayo?
Umangede ongaphumelela bayilinde indlu, usebenzisa yokuhlala aquarium ubudala, phansi okuyinto kunconywa ukubeka namatshe ambalwa futhi Driftwood, uthele ungqimba isihlabathi noma emhlabeni. Top kudingeka Mesh ikhava. izimo Wadala nanela ngu wabathanda izinambuzane, efana izinyendle. Lokho ukudla baleen ezifuywayo? Cishe zonke. imifino yashizi, izithelo, clover futhi amacembe e-dandelion, bran steamed, amacimbi esithambile futhi iziphungumangathi, ubisi, ukudla izinja namakati. Abadala bayakwazi ukusebenzisa kubhavu yokudla, intsha Kunconywa ukudla fafaza ngokulinganayo phezu yonke indawo substrate, ukuhlanzwa njalo 2-3 kwezinsuku isitshalo izinsalela. Ukunisela isinambuzane is best ukusebenzisa esihlabathini ezimanzi noma ngesiponji esimanzi, abaphuza angazi kanjani ukusebenzisa izinyendle.
Igama elithi "Ukuphahlazeka" - kuyini?
Chicago: labantu, endaweni, indawo yesikhathi, isimo sezulu. US megacities
Abalungile zezwe kanye nemisebenzi yayo
Ukuqeqeshwa ngolimi lwesiNgisi kusuka ekuqaleni: amathiphu namasu
Lapho ungalanda eliphezulu movie nemidlalo ye-TV?
Ubhapathizo amantombazane. isakramente ekhethekile
Ikhilikithi zobuqili zobuqili! Kanjani ukulwa naso - nifunde athikili yethu!
California avelele, noma umphumela izinwele wokushiswa
Ukupheka apula cider: iresiphi of iwayini elimnandi
Vermouth: onjani isiphuzo?
Ihhotela safira Palms 4 * (Djerba, Tunisia) izithombe kanye nokubuyekeza